Bilaab ganacsi, shirkad, LLC Kheyraadka Qaabaynta
Dhamaan ilaha aad u baahan tahay si aad ganacsi cusub u bilowdo. Baro wax ku biirinta, samaynta LLC iyo sida aad isla markiiba ugu dari karto adoo adeegsanaya shirkad duqeyda duqoobay. Raadi macluumaad faa'iido leh oo ku saabsan noocyada ganacsiga, faa'iidooyinkooda iyo sida sida saxda ah loogu hawlgeliyo loona dayactiro hay'ad ganacsi si kor loogu qaado ilaalinta mas'uuliyadda. Waxaan shirkado ka sameysanaa dhammaan gobollada 50 ee Mareykanka, Kanada iyo dalal badan oo shisheeye. Qaar ka mid ah kuwa ugu caansan waa Delaware LLC iyo Wyoming LLC.
Ku biir ama Samee LLC ah hadda, Wac 1-888-444-4812 Macluumaadka iyo Adeegyada Bilaabashada Ganacsiga
Shirkad qaan ah oo xadidan, ama LLC waa qaab dhismeed urur ganacsi… (fadlan guji xiriirinta)
An LLLP waa Shuraako Xadidan oo Xadidan. Waa kuwan labada faa'iidooyin ee waaweyn ee hay'addan, ama waa qaab dhismeed urur ganacsi oo… (fadlan dhagsii xiriirka)
Yey tahay inuu wax ku biro?